Nabadoon Goordhaw Sixun Lagu Dilay Magaalada Baladweyne Ee Xarunta Gobolka Hiiraan
Loading...	Home Wararka Nabadoon Goordhaw Sixun Lagu Dilay Magaalada Baladweyne Ee Xarunta Gobolka Hiiraan
Nabadoon Goordhaw Sixun Lagu Dilay Magaalada Baladweyne Ee Xarunta Gobolka Hiiraan	Monday, 01 October 2012 16:42	Wararkii ugu danbeeyay ee haatan naga soogaaraya Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi lagu dilay mid kamid ah Nabadoonada halkaasi canka ka ahaa.
Waxaana latuugtay Nabadoonkaan xili uu ku sugnaa Gurigiisa hortiisa waxaana latilmaamay in waqtigaas uu weesa qaadanaayay Salaada Casir.
Waxaana dilkaan nabadaanka u geestay ilaa labo ruux kuwaas oo kuhubeesnaa Baskoolado waxaana latilmamaay in ay goobta kabaxasadeen markii ay arkeen in uu reeriyooday Nabadoonka oo ay Caar dultaagnaayeen.
Waxaan lagu magacaabi jiray Alla Unaxariistee Nabadoonka ladilay Barre Maxamed Xalane waxaana uu kamid ahaa Nabadoonada sida weyn looga yaqaanay Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Waxaana ay sheegayaan wararkii ugu danbeeyay oo aan halaaki ka heleeno in ay soogaareen Ciidamada Dowlada Soomaaliya goobta uu dilkaan ka dhacay kuwaas oo halkaasi ka sameeyay Baaritaano ay ku baadi goobayaan Cidii ka dan beysay dilkaan.
lama oga ilaa iyo iminka cida ay u sooqab qab teen Ciidamada Dowlada Soomaaliya oo ay dilkaan laxiriirinaayaan sidookale ilaa iyo iminka macada cidii kadan beysay dilka loogeestay Nabadoonkaan.
Baladweyne ayaa waxaa haatan kajira Fatahaad uu sameeyay Wabiga Shabeele kaas oo geestay bur burka hanti badan iyo dadkaba.